विद्यालय, साथी र समाजसँग जोडिने परोपकारी बाटो - MeroReport
Posted by Udaya GM on May 1, 2013 at 1:00pm
रोल्पाको जङ्कोट–४ जङ्कोटका चन्द्र जीएमले २०५९ सालमा दाङको गोरखा इन्टरनेशनल पव्लिक सेकेण्डरी स्कूलबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरे । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चीन पुगेका चन्द्रलाई सधैंभरि एउटा कुराले सताइरह्यो । एउटै विद्यालयमा पढ्यो, बाल्यकाल गुजार्यो तर त्यसपछि? त्यसपछि भेटघाट र कुनै सम्पर्क छैन । एउटै विद्यालयमा पढेका त्यसपछिका साथीहरुसँग त झन गोरु बेचेको साइनो पनि नरहने ।
मनमनै छटपटिएर अध्ययन गरिरहेका चन्द्रसँग संयोगले कहींकतै दाङको गोरखा स्कूलमा पढेका विद्यार्थीहरुसँग जम्काभेट हुँदा उनले अर्कै खालको बिछट्टै आफ्नोपन भेटे । के गर्ने भनेर छटपटिइरहेका चन्द्रलाई त्यो अपनत्वले झनै घच्घच्यायो । आफूसँग पढेका साथीहरु र त्यसपछि आएका गोरखा स्कूलका विद्यार्थीहरु अहिले कहाँ होलान्? के गरिरहेका होलान्? सञ्चोबिसञ्चो के छ? कुनै अत्तोपत्तो छैन । त्यस्तैमा “ढुङ्गा खोज्दा देउता मिल्यो” चन्द्रलाई । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले उनको उनको लक्ष्य र उद्देश्यमा “देउता” बनेरै आयो सहयोगी बनेर । गोरखा स्कूलका केही पूर्वविद्यार्थीहरुको सल्लाहमा फेसबुकमा ग्रुप खोलियो, न्क्ष्एज्क्क्ष्बलक ायच धभािबचभ।
आफूले पढेको विद्यालय, साथीहरु र समाजसँग जोडिन फेसबुक ग्रुप खोलेका चन्द्र जीएमले गोरखा स्कूल दाङका पूर्वविद्यार्थीहरुको तर्फबाट ११ वर्षपछि उही विद्यालयमा उभिएर ठूलो सामाजिक कार्यको घोषणा गरे, बिहीवार । दाङकै तुलसीपुरस्थित राप्ती अञ्चल अस्पतालमा डा. चन्द्र जीएमको रुपमा कार्यरत चन्द्रले गोरखा स्कूलका पूर्वविद्यार्थीहरुको तर्फबाट राप्ती अञ्चलका विकट, विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई प्रतिवर्ष २ जनालाई पूर्ण छात्रवृत्तिको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुको योजनाअनुसार यसवर्ष राप्तीका ५ जिल्लाबाट अति विकट, विपन्न र जेहेन्दार २ जना विद्यार्थी (१ महिला, १ पुरुष) छानिने छन् । कक्षा ५ उत्तीर्ण गरी छनौटमा परेका दुबै विद्यार्थीले कक्षा ६ देखि कक्षा १२ सम्म नेपालमै उत्कृष्ट निजी विद्यालय मानिएको गोरखा स्कूलमा पूर्ण आवासीय सुविधासहितको अध्ययनको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । प्रतिवर्ष २ जना थपिँदै जाँदा आगामी ७ वर्षपछि कक्षा ६ देखि कक्षा १२ सम्ममा गोरखा स्कूलका पूर्वविद्यार्थीहरुले वर्षमा १४ जना विद्यार्थीहरुको पूर्ण आवासीय सुविधासहितको छात्रवृत्तिको भार थेग्नुपर्नेछ । सालाखाला १ वर्षमा १४ लाखको निरन्तर भार ।
यत्रो भारी बोक्न सकिएला त ? गोरखा स्कूलका पूर्वविद्यार्थीहरुको संगठन “गोरखा इन्टरनेशनल पव्लिक सेकेण्डरी स्कूल आल्मुनाई एशोसियशन (जिप्सा)का अध्यक्ष डा. चन्द्र जीएम भन्छन्, “धेरै गृहकार्यपछि हामीले यो कार्यको सुरुवात गरेका हौं । म गोरखाबाट प्रवेशिका उत्तीर्ण गर्ने पहिलो ब्याच हो । अहिलेसम्म ११ औं ब्याच बाहिरिइसकेको छ, करिव १ हजार विद्यार्थी । अमेरिका, अस्टे«लिया, युके, जापान, भारत, रुस लगायतका देशहरुमा कोही डाक्टर, कोही इञ्जिनियर, कोही पाइलटको अध्ययन गरिरहनु भएको छ भने जागिर पनि खाइरहनु भएको छ । कोही विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ । हामीबीचमा केही गर्ने सल्लाह भएरै यो कार्यको थालनी गरेका हौं ।” उनी थप्छन्, “सुरुमा हामी केही रोल्पाका साथीहरुमात्रै भएकाले रोल्पाका लागि केही गरौं भन्ने थियो । पछि सबैको एकता, छलफल र सहमति हुँदै गएपछि राप्तीका पाँच जिल्लाबाट नै छनौट गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं । अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फको यात्रामा जान शिक्षामै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने लागेर शिक्षातर्फ केही गर्न खोजेका हौं ।” उनले प्रशन्नता व्यक्त गरे, “विपन्न र विकटका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सहयोग हुने भयो । त्योभन्दा ठूलो कुरा हामी पूर्वविद्यार्थीहरु र हामीले पढिरहेको विद्यालयसँग निरन्तर जोडिने पुल बन्यो र यसले सामाजिक काममा पनि टेवा दिने भयो ।”
आफ्ना पूर्वविद्यार्थीहरुको कामका कुरा सुनेर प्रफुल्ल मुद्रामा उभिएका गोरखा स्कूलका प्रिन्सिपल एलबी थापाले आफ्ना पूर्वविद्यार्थीहरुको जति सराहना गरे पनि कम हुने बताए । “मेरै विद्यार्थी भए पनि म आज डा. चन्द्र भनेर सम्बोधन गर्छु । उहाँहरुले राम्रो काम थाल्नुभएको छ । उहाँहरुको यो काममा विद्यालयले पनि होस्टेमा हैंसे पक्कै गर्नेछ ।” दाङमै दर्ता भएको पूर्वविद्यार्थीहरुको संगठन “जिप्सा”का अध्यक्ष डा. चन्द्रले आशा व्यक्त गरे, “यो भार थेग्नसक्छौं भन्ने हिम्मत छ । त्यसमा पनि सबैको सहयोग र प्रेरणाले झनै अगाडि बढाउला । हामी बामे सर्दैछौं । तपाईंहरु हामीलाई हात दिनुहोस्, साथ दिनुहोस् ।”
Comment by Dilli Malla on May 2, 2013 at 10:09pm
धेरै धेरै बधाई तथा कार्य सफलताको शुभकामना डाक्टर चन्द्र, उहाँका साथीहरुलाई र जिप्सालाई । अनि सरल र सटिक तरिकाले विषयवस्तुको प्रस्तुतिका लागि उदय जीएमलाई धेरै धेरै बधाई अनि धन्यवाद ।
Comment by Ram Kumar D.C. on May 1, 2013 at 11:20pm
This is glad news for us, now every people and every place should come in main stream of society.
Comment by Udaya GM on May 1, 2013 at 10:46pm
प्रकाशजी, कमेण्टका लागि धेरै धेरै धन्यवाद ।
Comment by Prakash Lamichhane on May 1, 2013 at 4:38pm
निकै राम्रो कार्य र त्यो कार्यलाइ शब्दमा उतार्ने अर्को कार्य । दुबैको तारिफ गर्छु र उदयजीबाट फेरी फेरी यस्तै सामग्रीको अपेक्षा पनि गर्छू । :)